Mucjiso Rabbaani ah oo ka dhacday Xafada Xamar jab-jab ee Magaalada Muqdisho
Loading...	Home Maqaallo Mucjiso Rabbaani ah oo ka dhacday Xafada Xamar jab-jab ee Magaalada Muqdisho
Mucjiso Rabbaani ah oo ka dhacday Xafada Xamar jab-jab ee Magaalada Muqdisho	Wednesday, 24 March 2010 17:45	administrator	Hooyo Soomaaliyed ayaa Wiil Mucjiso ah oo Calooshiisu iyo Wadnihiisu ay banaan yihiin waxa ay ku dhashay Degmada Xamar Jajab ee Gobolka Banadir.
Wiilkaani Mucsida ah ayaa malmo ka hor waxa uu ku dhashay Degmada Xamar Jajab ee Gobolka Banadir waxaana loo bixiyay amaba lagu magacaba Qadar Maxamed Muxyidiin ayaa cafimadkiisu aad u fiican yahay , Hase ahatee waxaad arkaysaa Caanaha uu cabaayo halka ay marayaan iyo Dhaq dhaqaaqa Wadnihiisu oo dadka soo arkay aad ay uga argagaxeen.
Waxana wiilkaani la yaabay marka uu dhashay Umulasadii dhalasiinaysay, waxayna u sheegtay Hooyada wiilka dhashay in wiilkeedu uu dhashay Isagoo Calooshiisu iyo Wadnahiisu ay banaan yihiin waxana ku dhahday Umulasadii waa in aad la xiriirta Taqtar caafimaad sida ugu dhaqsiyaha badan, wixii markaasi ka danbeeyay Hooyadii waxa ay la xiriirtay Dhaqaatiir caafimaad waxayna ku wargeliyeen Taqaatiirta in wiilkeedu uu u baahan yahay Qaliin Dibada ah oo aan Gudaha waxba looga qaban karin.
Hadaba qoyska Wiilkaasi dhalay oo aanan ehayn Qoys jeeb buuran ayaa waxa ay ka codsanayaa Hay'adha gargarka iyo guud ahan Shacabka Soomaaliyeed in ay Gargaran Wiilkooda si loo badbadiyo Wiilkaasi Ilaah ayaa badbaado lehee.
Ma aha markii ugu horeesay oo mucjiso Rabbaani ah ka dhacda Dalka Soomaliya tan iyo intii meesha ka baxday xukuumadii dhexe, waxana Dalka wixii xiligaasi ka danbeeyay ka dhacay Muciso badan oo ay la yabeen Dadka arkay, ayadoo culumada Mucjisadahaasi ku macneenay in ay keenayaan dhiiga micna darada u daadanaayo iyo Alle ka cabsi la'aanta, waxayna ku shegeen Mucjiso waliba dhacda ay tahay in lagu waano qaato.
KULANKII MEDEYNTA GOBALADA DHAXE EE SÕMAALIYA OO LA SOO GABAGABEEYAYWednesday, 19 June 2013 DAD BADAN OO KU DHINTAY QAARNA KU DHAAWACMAY QARAX KA DHACAY WANLAWEYN EE GOBOLKA SH/HOOSAESunday, 16 June 2013 MASHAAKILKA IYO BOOBKA KA TAAGAN GOBOLADDA JUBOOYINKA IYO TAARIIQDII DEEGAANADAAS (WARBIXIN)Saturday, 15 June 2013 DAGAALO BEELEED SAAKAY KA SOCDA DULEEDKA MAGAALADA JOWHARSaturday, 15 June 2013 GOLAHA AMAANKA QM OO WARSAXAAFADEED KA SOO SAARAY ARINTA JUBOOYINKAFriday, 14 June 2013 Main Menu